ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်းဗေဒင်ပညာ (6)
သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်းဗေဒင်ပညာ (6)
Ø မူလ မွေးသက္ကရာဇ်ကို (၇)စား အကြွင်းသည် ဘင်္ဂဂြိုဟ် ဖြစ်၏။
Ø ၎င်းဘင်္ဂဂြိုဟ်၏ အောက်၌ မွေးဘွားသည့် လကိုမှတ် (၇)နှင့်အထက်ဖြစ်က (၇)ဖြင့်စား၍ အကြွင်းကိုမှတ်
Ø ၎င်းလအောက်မှ မွေးနေ့ဂြိုဟ်ကိုမှတ်
ဥပမာ . . . မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ပြည့်၊ တပို့တွဲလ၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်နေ့သား
၅= ဘင်္ဂဂြိုဟ် ၄= တပို့တွဲလ ၅= မွေးနေ့ဂြိုဟ်
အထက်ပါပုံစံကို ရလျှင် ဘင်္ဂဂြိုဟ်မှစ၍ ဂြိုဟ်စင်အတိုင်း တစ်ခုတိုး၍ ရေးချပါ။
မူလဂြိုဟ်၏ အောက်ရှိဂြိုဟ်များနှင့် ပေါင်းရကိန်းသည် (၁၀) အထက်ကျော်လျှင် အားရှိသောဂြိုဟ်ဖြစ်၍ (၁၀) အောက်ရသော ဂြိုဟ်များမှာ အားမဲ့သော ဂြိုဟ်ပင် ဖြစ်လေသည်။
အားကောင်းသောဂြိုဟ်သည် ဇာတာရှင်အား ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး အကျိုးပြုသောဂြိုဟ် ဖြစ်လေသည်။ အားမဲ့သောဂြိုဟ်သည် ဇာတာရှင်အား အကျိုးမပေးရုံသာမက ထိခိုက်နစ်နာခြင်းကို ဖြစ်စေတတ်လေသည်။ (၁၀)ကျော်သော ဂြိုဟ်လည်းဖြစ်၊ ဇေယျ၊ ၀ရ၊ လာဘ ဂြိုဟ်လည်းဖြစ်ခဲ့လျှင် အထူးအကျိုးပေးလေသည်။
နမူနာတွက်ပြထားပုံစံတွင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်သည် ၁၄အား၊ သောကြာဂြိုဟ်သည် ၁၇အား၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် ၁၁အား ဖြစ်လေရာ (၁၀)အားကျော်သဖြင့် ဂြိုဟ်အားကောင်းလေသည်။ မူလတိုင်တွင်ကြည့်ပါက ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ဂြိုဟ်သည် ဇေယျဌာနတွင် ရှိသောကြောင့် ၎င်းအား (၁၁)ရသောဂြိုဟ် ဖြစ်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ဇာတာရှင်အား ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဂြိုဟ်ပရိယာယ်အားလျော်စွာ အကျိုးပေး ကောင်းမွန်စေလေသည်။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ဂြိုဟ်သည် ကိစ္ဆဌာနတွင် ရပ်တည်ရုံသာမက အားကိုတွက်ကြည့်လျှင် (၂)အားမျှသာ ရသောကြောင့် အဆိုးဆုံးသော ဂြိုဟ်ဖြစ်ကြောင်း လွယ်ကူစွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်။
Ø အိမ်ထောင်ရေး - ကျား၌ သောကြာဂြိုဟ်၊ မ၌ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုကြည့်
Ø စီးပွားရေး - တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် (အလုပ်အကိုင်)၊ တနင်္လာဂြိုဟ် (ငွေကြေး) တို့ကိုကြည့်
Ø သားသမီး - သောကြာဂြိုဟ် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် တို့ကိုကြည့်
Ø ကျန်းမာရေး - မွေးနံကိုကြည့်
Ø ပညာရေး - ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကိုကြည့်
Ø ရန်အမှုအခင်း - စနေဂြိုဟ်ကိုကြည့်
ဗေဒင်ပညာတွင် ကိန်းဂဏန်းများကြောင့် အတတ်အချပ် မဟောပြောနိုင်။ ကိန်းဂဏန်းကြောင့် မုချကောင်းခြင်း၊ ဆိုးခြင်းများကို ဟောနိုင်ပါလျှင် (ယတြာ) ပြုပြင်ခြင်း ပညာဟူသည် ယုတ္တိမရှိတော့ချေ။ ယတြာဆိုသည်မှာ ဆိုးသောကိန်းများကို ကြေစေပျောက်စေ၍ ကောင်းသောကိန်းများတွင် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် ဓါတ်သဘာဝ ကိန်းများအလိုကျ ပြုပြင်စီမံခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ဤဆန်းဗေဒင်ပညာ၏ ယတြာစီမံမှုသည် ကိန်းခန်းဒသာတို့၏ စည်းကမ်းအတိုင်း ဆန်းဝင်အောင်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်၍ ကိန်းခန်းမှ အပဖြစ်သော အခြားသောယတြာနည်းစနစ်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ တူညီခြင်းလည်း မရှိပါချေ။ မှန်ကန်သော ကိန်းခန်းများကို အားကိုးပြု၍ သဘာဝကျကျ စံနစ်မှန်အတိုင်း ပြုပြင်ရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ထို့ကြောင့် ဤဆန်းယတြာများကို အားကို၍ ပြုလုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် အောက်ပါအချက်တို့ကို ဂရုစိုက်ရပါမည်။
(က) ဤဆန်းယတြာများ ပြုလုပ်စဉ် အခြားသော ယတြာနည်းများကို ပြုလုပ်ခြင်း မရှိစေရ။ အကြောင်းမှာ ဆန်းယတြာက ဆန်းဝင်အောင် စီမံမှုများသည် အခြားသောနည်းများကြောင့် ဆန်းကျင်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။
(ခ) ဤဆန်းဗေဒင်က အရှောင်ခိုင်းသော အကြောင်းအရာများကို တသွေမတိမ်း ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
(ဂ) ပြုလုပ်အပ်သော ယတြာကို ရိုရိုသေသေ လေးလေးစားစား စူးစိုက်ယုံကြည်၍ လုပ်ဆောင်ရမည်။ လုပ်ဖြစ်ရုံမျှ မဟုတ်စေရ။ အားကိုးယုံကြည်သောစိတ် ပြင်းစွာရှိရမည်။
(ဃ) ဤယတြာများ ပြုလုပ်စဉ်ဖြစ်စေ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်စေ နွားသားကျွဲသားကို သိလျက်နှင့် မစားစေရ။ အဓိဌာန် ရှိစေရမည်။
(င) ဤယတြာကြောင့် အဆိုးပြေခြင်း၊ အကောင်းဝင်ခြင်းများ ခံစားရသော် နွားသား ကျွဲသားကို မစားတော့ပါ ဟူသော အဓိဌာန်ရှိလျှင် ပိုမို၍ အကျိုးရှိစေမည်။
(စ) ဆရာပြုလုပ်သူသည် နှစ်စဉ် အတာတက်သောနေ့၌ နွားနှင့်ကျွဲတို့ကို ဘေးမဲ့ လှူဒါန်းနိုင်ရန် တစ်နှစ်အတွင်း ဟောပြောခြင်း၊ ယတြာပြုလုပ်၍ အောင်မြင်ခြင်းများအတွက် သီးခြား အလှူခံပုံးထား၍ လှူဒါန်းစေရမည်။
ဤကဲ့သို့ ဆန်းဗေဒင်ပညာ၏ သမားစဉ်ဆက် လိုက်နာခဲ့သော စည်းကမ်းများကို လိုက်နာပြီး ပြုလုပ်စီမံသမျှသည် အထူးဓါတ်ခိုက်၍ လျင်မြန်စွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မျက်ဝါးထင်ထင် ထူးထူးခြားခြား ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ကိန်းနိမိတ်များက ပြည့်စုံနေလျှင်ဖြစ်စေ၊ နိမိတ်တဘောင်များက ထင်ရှားစွာ မြင်သိပြီးလျှင်ဖြစ်စေ၊ ယတြာ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ မရှိနိုင်တော့ပါ။ အထူးသဖြင့်
လာသောနေ့ ဒသာတိုင်တွင် နိစ်ပြ ဖြစ်၍ ဆိုးခြင်း။
အထိုင်မှာ အနိဌ နေရာဖြစ်ခြင်း
ဆရာ၏ အမေးအား ဖြေသည့် တဘောင်က ဓါတ်မလိုက်ခြင်း
တို့ကိုတွေ့မြင်ရလျှင် ထိုဗေဒင်မေးသူအား အကောင်းယတြာများ (အကျိုးရှိစေသော ယတြာများ) ပြုလုပ်၍ ဓါတ်မခိုက်ကြောင်း သိရမည်။
ရောက်ဆဲကာလ ကိန်းဒသာတိုင်အတွင်းသာလျှင် ယတြာပေးမှုကို ပြုရသည်။ အဆိုးပြေပျောက်ခြင်းယတြာ၊ အကောင်းဖြစ်မြောက်စေခြင်း ယတြာတို့သည် ဒသာကိန်းကိုကျော်၍ (ကြိုတင်ပေးထားခြင်း) မပြုလုပ်သင့်။ အစဉ်အလာအရ ဤကဲ့သို့ ပေးလေ့မရှိပေ။ မေးသောကာလနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ရောက်ရှိဆဲ လေးလ ဒသာအတွင်း၌ ဓါတ်ယတြာပေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကြာသပတေးဂြိုဟ်ဒသာသို့ ရောက်ခိုက်ဖြစ်ပါက ဒသာတိုင်သည် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နှင့် စနေဂြိုဟ်တို့သည် အဆိုးဆုံးနေရာများတွင် ရှိသည်။ ၎င်းဂြိုဟ်နှင့် ဆိုင်သော အဆိုးများကျရောက်လာခြင်း၊ အဆိုးနိမိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း မရှိရလေအောင် အချေယတြာပြုရာတွင် ၎င်းဂြိုဟ်နှစ်လုံးနှင့်တွဲစပ်၍ ဟောရလေသည်။
ဤကိန်းတွင် စနေဂြိုဟ်ပျက်ခြင်းသည် အမှုအခင်း၊ ရုံးဂတ်အချုပ်အနှောင်၊ ရန်သတ္တရုကြုံတတ်သဖြင့် ငါးလွှတ်ခြင်း၊ ယတြာပြုရသည်။ ပြုပုံမှာ (စနေဂြိုဟ်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း ငါး (၇၄)ကောင်) ကိုယ်တိုင်ဝယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ ထိတွေ့ကိုင်တွယ် စေခြင်းသော်လည်းကောင်း ပြုစေ၍ ဘေးကင်းရာသို့ လိုရင်းအချက်ကို အာရုံပြုဆုတောင်းပြီးမှ လွှတ်ရမည်။
ထို့အတူ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ငါး (၇၄)ကောင်ကို ထပ်မံ၍ လွှတ်ရမည်။ ပထမ (စနေဂြိုဟ်)၊ ဒုတိယ (ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်) နေ့များတွင် မွန်းလွဲပိုင်း၌ လွှတ်ရမည်။
ဤတွင် (က) နိစ်ကြီးဌာနရှိ ဂြိုဟ်အစ
(ခ) ပြဌာနရှိ ဂြိုဟ်အဆုံး
(ဂ) မွန်းလွဲပိုင်း ဖြစ်ရခြင်းတို့သည် အညံ့ချေယတြာတွင် သုံးလေသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းခြင်း၊ အမှုအခင်း ရန်သတ္တရု စသည်တို့ ဖြစ်ကြုံနေလျှင် (သက်ရှိ ငါးအရှင်လွှတ်ခြင်း ယတြာ) ပြုရလေသည်။
သာမန်အားဖြင့် စီးပွားရေး၊ ကြီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ ပညာရေးအတွက် အခက်အခဲများ အဟန့်အတားများ ကင်းရှင်းပပျောက်ရန် အတွက်မူ သက်ရှိငါးလွှတ်ခြင်းအစား၊ ဆန်ကို မြေပြောင်ပြောင်တွင် ၎င်းနေ့များတွင် မွန်းလွဲပိုင်း၌ အတန်းလိုက်ပုံ၍ သတ္တ၀ါမခွဲခြားဘဲ ကျွေးမွေးခြင်း ဒါနမှုကို ပြုစေရလေသည်။
ဤကိန်းဒသာတွင် အညံ့ပြေပျောက်သော ယတြာမှာ
(က) စနေဂြိုဟ်နေ့တိုင်း မွန်းလွဲပိုင်း
(ဂ) အင်္ဂါဂြိုဟ်ထောင့်သို့တန်း၍ ဆန် (၇၄)ပုံ ပုံရမည်။ (မြေမဆန့်လျှင် ၂တန်း ၃တန်း စသည် ပုံနိုင်သည်။) ငါးလွှတ်သောယတြာပြုလုပ်ရသူမှန်သ၍ ဆန်ပုံ၍ပေးရသည်။
ဤအညံ့ချေယတြာတွင် ညံ့သောဂြိုဟ်နှစ်လုံး၏ အရေအတွက် (အများမှ အနည်းသို့) ညံ့သောဂြိုဟ်များ၏ နေ့နှစ်နေ့ကို မူတည်၍ (တန်းစီးဌာနရှိ ဂြိုဟ်အရပ်သို့) မြေပြောင်ပြောင်မှာ အတန်းလိုက်တန်း၍ ပုံပြီး ဆန်ကို ဒါနပြုရလေသည်။
ဤဲဓါတ်ယတြာသည် အလွန်ထက်မြက်၍ အကျိုးသက်ရောက်မှု၌ ထင်ရှားသိသာလှပေသည်။ ညံ့သောဂြိုဟ်၏ အရေအတွက်မျှသော ဆန်တို့ တစ်စိမကြွင်း ကုန်မှ ယတြာမြောက်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ကြိမ်မက ပြုလုပ်ရလေသည်။ မိမိ၏ ဇာတာကိန်းခန်းအရ အညံ့နှင့် အခက်အခဲဟူသ၍ ပျက်ပြယ်ပျောက်လွင့်သွားစေသော ဓါတ်ဖြစ်လေသည်။
(ကိန်းမှန်ဓါတ်မှန်သဖြင့် စီမံရာတွင် စိတ်ကို အာရုံစူးစိုက်နိုင်သလောက် အခက်ခဲဟူသမျှ အညံ့ဟူသမျှ ကြုံတွေ့နေရသော ဘေးဒဏ်ဟူသမျှ အပျောက်ပျက်သည်မရှိ၊ မလျော့ပါးသည်မရှိ။ ပျောက်ပျက်ခြင်း လျော့ပါးခြင်း အမှန်ဖြစ်ရလေသည်။ ကိန်းအရ နိမိတ်ဆိုးများလည်း မပေါ်ပေါက်စေရန် တင်ကြိုတားဆီး ပယ်ရှားခြင်း ဖြစ်လေသည်။)
မွေးနံသည် နိစ်ပြတို့တွင်လည်း တည်ရှိ၍ နာမည်အက္ခရာများကလည်း တွဲလျက် နိစ်ပြ ဖြစ်နေလျှင် ငါးလွှတ်ခြင်းယတြာကို တင်ကြို ပြုထားအပ်၏။
ဤဥပမာ ဒသာတိုင်တွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်၊ အင်္ဂါဂြိုဟ် သည် ကောင်းကျိုးကို ရှေ့ဆောင်သော ဂြိုဟ်များ ဓါတ်များ ဖြစ်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်နေ့နံနက်ပိုင်း (မွန်းမတည့်မီ)တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ် ယောက်ျားတစ်ဦးက (ကိုယ်တိုင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်လျှင် ကိုယ်တိုင်က) အင်္ဂါဂြိုဟ်ဒေါင့်သို့ ထွက်လျက်ရှိသော သြဇာကိုင်း ကို ဖြတ်ယူပေးရသည်။
၎င်းသြဇာကိုင်းကို ဇာတာရှင်၏ လက်ဖြင့် တိုင်းတာရန်မှာ ၀ဲဘက်၊ လက် ၁ လက်သစ်၊ ယာဘက် လက် ၂ လက်သစ် (ပေါင်း ၃ လက်သစ်) (သို့မဟုတ်) ညာဘက်လက်ညှိုးနှင့် တိုင်၍ ဖြတ်ယူရမည်။
အဖျားထိပ်ဝတွင် (စ) အက္ခရာကို (အရဟံ) ဟုရွတ်၍ တဆက်တည်း ရေးရမည်။ (ခံတံ၊ ဖေါင်တိန် စသည်ဖြင့် ထင်အောင်ရေးရမည်) မထင်ပါက ထပ်၍ထပ်၍ ၎င်းနည်း ရေးရမည်။ ၎င်းသြဇာကိုင်းကို ဆီမီးခွက်တွင် ဖယောင်းစက်ချ၍ စိုက်ထူပြီးလျှင် အင်္ဂါဂြိုဟ်နေ့ ညနေနေ၀င်ပြီးမှ စတင်၍ ဘုရားကို ညစဉ် ဆီးမီးတစ်တိုင်တင်၍ မီးပူဇော်ရမည်။ သက်စေ့ ပူဇော်ရမည်။ ရက်မခြားစေရ။ ရက်မပျက်စေရ။ ဆက်တိုက် သက်စေ့ ပူဇော်ရမည်။
စအက္ခရာဘက်မှ အမှတ်အသားပြု၍ ၎င်းအမှတ်အသားကို မိမိဘက်သို့ မျက်နှာမူစေရမည်။ တစ်ဘက်သို့ လှည့်၍ ဓ အက္ခရာဖြစ်သွားလျှင် ပျက်သော စနေဂြိုဟ်အက္ခရာဖြစ်၍ ထိခိုက်စေတတ်သည့်အတွက် အထူး သတိထားရလေသည်။ ဖယောင်းတိုင် အက္ခရာပေါ်သို့ မစိုက်မီ သတိပြုပါ။
တိုင်ထိပ်ဒေါင့်အရပ်သို့ထွက်သော တန်းစီး တိုင်ထိပ် (သို့မဟုတ်) တိုင်ထိပ် တန်းစီး နံသင့်အကိုင်း အရိုး၊ တိုင်ထိပ်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တိုင်ထိပ်နေ့သား ယောက်ျားလေးက ယူ၍ မိမိလက်ဖြင့် တန်းစီး လက်ဝဲ လက်၂သစ်၊ တိုင်ထိပ် လက်ယာ လက် ၂ သစ် (ပေါင်း လက် ၄ သစ်) ဖြင့်တိုင်းဖြတ်။ ထိပ်ဝတွင် တိုင်ထိပ် အစအက္ခရာ (သို့) တန်းစီး အစအက္ခရာရေး။
၂-၄ ခရေ။ ၀ဲလက်၂သစ်၊ ယာလက်၂သစ် (ပေါင်း ၄သစ်) (သို့မဟုတ်) လက်ခလယ်နှင့် တိုင်းဖြတ်။ ထိပ်ဝတွင် “ယ” အက္ခရာရေး။
၃-၅ စိန်ပန်းကိုင်း။ ၀ဲလက်၂သစ်၊ ယာလက်၃သစ် (ပေါင်း ၅သစ်)။ ထိပ်ဝတွင် “စ” အက္ခရာရေး။
၄-၆ သရက်။ ၀ဲလက၃သစ်၊ ယာလက်၃သစ် (ပေါင်း ၆သစ်)။ ထိပ်ဝတွင် “သ” အက္ခရာရေး။
၅-၀ ပိတောက်။ ၀ဲလက်၃သစ်၊ ယာလက်၎သစ် (ပေါင်း ၇သစ်)။ ထိပ်ဝတွင် “တ” အက္ခရာရေး။
၆-၁ သပြေ(သို့မဟုတ်)သစ်အယ်။ ၀ဲလက်၃သစ်၊ ယာလက်၃သစ် (ပေါင်း ၆သစ်)။ ထိပ်ဝတွင် “အ” အက္ခရာရေး။
၀-၂ ဒေါင့်သို့ထွက်သော ကံ့ကော်ကိုင်း (ခတက်ကိုင်း)။ တနင်္လာဂြိုဟ်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တနင်္လာဂြိုဟ်ကယူ ၀ဲလက်၃သစ်၊ ယာလက်၃သစ် (ပေါင်း ၆သစ်)တိုင်း။ ထိပ်ဝတွင် “က” အက္ခရာရေး။
v တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်တန်းစီး - အင်္ဂါဂြိုဟ်နေ့ နံနက်ပိုင်း။ ဇီးပင်အောက်တွင် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ဒေါင့်သို့ လှည့်ထိုင်ပြီး အင်္ဂါဂြိုဟ် ၀ယ်ပေးသော အုန်းသီးစိတ်ကို (ကိုယ်တိုင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်လျှင် ကိုယ်တိုင်ဝယ်၍) ၀ယ်ခဲ့သလောက် ကုန်အောင်စားပြီးမှ အလိုရှိရာ အကြံအစည် အလုပ်အကိုင်တို့ကို (အောင်မြင်ပြီးစီးရမည်) ဟု အောက်မေ့ပြီး ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ရမည်။
v တနင်္လာဂြိုဟ်တန်းစီး - ၀ါးပင်အောက်တွင် (သို့မဟုတ်) ရဲယိုပင်အောက်တွင် တနင်္လာဂြိုဟ်အရပ်သို့ လှည့်ထိုင်ပြီး သောကြာဂြိုဟ် ၀ယ်သော ကြံကိုစုတ်ရမည်။ (ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နေ့နံနက်ပိုင်း)
v အင်္ဂါဂြိုဟ်တန်းစီး - ကြာသပတေးဂြိုဟ်နေ့ နံနက်ပိုင်း၊ ပေါက်ပင် (သို့) စိန်ပန်းပင်အောက်တွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်ဒေါင့်သို့ လှည်၍ထိုင်ပြီး ကြာသပတေးဂြိုဟ် ၀ယ်ပေးသော ဇီးသီးကို စားရမည်။
v ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တန်းစီး - သောကြာဂြိုဟ်နေ့ နံနက်ပိုင်း သရက်ပင်အောင်တွင် တောင်အရပ်သို့ လှည့်ထိုင်ပြီး သောကြာဂြိုဟ် ၀ယ်ပေးသော သစ်သီးယို တစ်ခုခုကိုစား (မြေပဲ၊ အုန်းယိုများမှအပ)
v ကြာသပတေးဂြိုဟ်တန်းစီး - စနေဂြိုဟ်နေ့နံနက်ပိုင်း၊ ထန်းပင်အောက်တွင် ကြာသပတေးဂြိုဟ် အရပ်သို့လှည့်ထိုင်ပြီး စနေဂြိုဟ် ၀ယ်ပေးသော ပဲလှော်ကို စားရမည်။
v သောကြာဂြိုဟ်တန်းစီး - တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်နေ့ နံက်ပိုင်း အုန်းပင်အောက်တွင် သောကြာဂြိုဟ်အရပ်သို့ လှည့်ထိုင်ပြီး တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ၀ယ်ပေးသော သစ်သီးကို စားရမည်။ (ဇီးသီး၊ ထန်းသီး စနေဂြိုဟ်၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်မှအပ)
v စနေဂြိုဟ်တန်းစီး - တနင်္လာဂြိုဟ်နေ့ ကံ့ကော်၊ ကုက္ကိုပင်အောက်တွင် စနေဂြိုဟ်ဒေါင့်သို့ လှည့်၍ ထိုင်ပြီး တနင်္လာဂြိုဟ် ၀ယ်ပေးသော ထန်းလျက် ကိုစားရမည်။
အထက်ပါ အကောင်းဓါတ်ယတြာများကို ပေး၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း အညံ့ချေယတြာများကိုပါ လုပ်ရမည်။ ယတြာဓါတ်များ အောင်မြင်ရေး၊ အညံ့များ ပြေပျောက်၍ ကောင်းကျိုးစီးပွားများ တိုးတက်၊ ရည်မှန်းချက်များ ဖြစ်မြောက်ရန် အောက်ပါတို့ကို လိုက်နာရမည်။
Ø ခိုက်သော ပျက်သော တိက္ခနိစ်၊ ပြဌာနများရှိ နံသင့် အစားအသောက်များကို ရှောင်ရမည်။
Ø ခိုက်သော ၎င်းဌာနရှိ ၂နေ့တွင် မြဲသောပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူခြင်း၊ လက်သဲခြေသဲ ဆံပင် လှီးဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။
Ø ခိုက်သော နံ ၂နံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို အလိုအလျောက် ၀င်လာခြင်းကို လက်မခံရ။ (၀ယ်ယူခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်)
Ø ခိုက်သော နံ၂နံ တွဲလျက်ရှိသော နာမည်ရှင်များ ကျွေးသည့် အစားအသောက်ကို မစားရ။ မဆက်ဆံ မပတ်သက်ရ။
Ø ခိုက်သော နံ၂နံ၏ ပရိယာယ်အလိုက် သက်ရှိများ ၎င်းဒသာအတွင် ညအိပ်လက်ခံခြင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်း မပြုရ။
အထက်ပါတို့ကို လိုက်နာသော် စီမံပြုလုပ်သော ဓါတ်ကို အဟန့်အတား ကင်းစင်စေပြီး ပိုမိုအားကောင်းစေသဖြင့် အောင်မြင်မှု အကျိုးရှိစေရလေသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - အဆွံ့ အအများကို မကျွေးမွေး၊ မလှူဒါန်းရ၊ မဆက်ဆံရ။ မကူးယှက်ရ။
တနင်္လာဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - အလှူမင်္ဂလာ မသွားရ။ ခွေး၊ ကြောင်၊ ကြက်၊ ကျီး တို့ကို ရည်စူး၍ မကျွေးမွေး မလှူဒါန်းရ။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - ကိုယ်အင်္ဂါဂြိုဟ်ချို့ယွင်းသူ၊ မျက်စိချို့ယွင်းသူနှင့် သူတောင်းစားများကို မကျွေးမွေးရ၊ မလှူဒါန်းရ။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - လက်မသန်သူများကို မကျွေးမွေး မလှူဒါန်းရ။
ကြာသပတေးဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - မျောက်၊ မြင်း သတ္တ၀ါများကို မကျွေးမွေး မလှူဒါန်းရ။
သောကြာဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - သင်္ချိုင်း သုဿန်မြေပေါ်မသွားရ။
စနေဂြိုဟ်ခိုက်လျှင် - ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ၊ မီးနေသည်များကို ပေးကမ်းခြင်း ကျွေးမွေးခြင်း မပြုရ။
အထက်ပါတို့မှာ ယတြာဓါတ်ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးသည်ဖြစ်စေ၊ ခိုက်သောအကြောင်းအရာများကို ရှောင်စေရလေသည်။ ခိုက်သောနေ့ ၂နေ့တွင် လုပ်ငန်းစတင်ခြင်း၊ ခရီးစထွက်ခြင်း၊ ခရီးဆုံးမှ ပြန်ခြင်းနှင့် ကိစ္စအားလုံးကို ရှောင်ရှားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မွေးနံသည် ခိုက်သော ၂ဌာနတွင် ရပ်တည်နေပါက ခိုက်သောနေ့များ၊ ခိုက်သော အရပ်သို့ နေ၀င်ပြီးသည်နှင့် သွားလာခြင်းကို လုံးဝ မပြုသင့်ချေ။ သွားစဉ်လည်းကောင်း၊ လာစဉ်လည်းကောင်း၊ ဘေးရန်သင့်တတ်ခြင်း၊ သွားလာမိသော် ဓါတ်ခိုက်သဖြင့် ၎င်းဒသာရက်ပိုင်းအတွင်း ကံမကောင်းခြင်း၊ မကောင်းသတင်း၊ မကောင်းသော အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ကြုံရတတ်ခြင်း တို့ကို ဖြစ်စေတတ်သော သဘောရှိကြောင်း သတိပြုရမည်။
ကောင်းသောဌာနမှ နံသင့်ပစ္စည်းများ ဣဋ္ဌ လက္ခဏာနှင့်တကွ ပြည့်စုံစွာ ၀င်ရောက်လာခြင်းသည် ကောင်းသော နိမိတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းသောဌာနမှ ပြသောနိမိတ်သည် ကောင်းကျိုးကို ဆောင်သော နိမိတ်ပင် ဖြစ်လေသည်။
ဆိုးသောဌာနမှ ပစ္စည်းများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ၀င်လာသည်ဖြစ်စေ ဆိုးနိမိတ်ပြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဆိုးသောဌာနမှ ပြသောနိမိတ်သည် ဆိုးကျိုးကို ဆောင်သော နိမိတ်ပင်ဖြစ်သည်။
ဂြိုဟ်များ ကောင်းဆိုးအလိုက် နိမိတ်ပြတတ်ကြပုံ
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ကောင်းဌာနတွင် နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းဆောက်ခြင်း အိမ်သစ် ပြင်ခြင်း၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်း တို့ကို ပြလျှင် ဇာတာရှင်ကောင်းကျိုးရတော့မည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် မကောင်းဌာနတွင်နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် အိမ်ပျက် အိမ်ပြိုခြင်း၊ အိမ်မှုဖြစ်ခြင်း၊ အိုးကွဲခြင်းတို့ကို ပြလျှင် ဇာတာရှင် ထိခိုက်တော့မည်။
တနင်္လာဂြိုဟ် မကောင်းဌာနတွင် နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် အလှူပျက်ခြင်း၊ မင်္ဂလာပျက်ခြင်း၊ အိမ်ခန်း၊ အိမ်ခေါင်ပျက်ခြင်း များကိုပြလျှင် ဇာတာရှင်တွင် ထိခိုက်တော့မည်။
တနင်္လာဂြိုဟ် ကောင်းဌာနတွင် နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် အလှူမင်္ဂလာကြီးများ တင့်တယ်စွာ ပြုခြင်းတို့ကို ပြလျှင် ဇာတာရှင် ကောင်းစားတော့မည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ်ကောင်းသောဌာနတွင် နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် ဆိုင်းပွဲ၊ ဇာတ်ပွဲ၊ ဆေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း တို့ကို ပြလျှင် ဇာတာရှင် ကောင်းကျိုးရတော့မည်။
အင်္ဂါဂြိုဟ် ဆိုးဌာနတွင်နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် အဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ဆေးထိုးမှားခြင်း၊ အစာအဆိပ်မိခြင်း၊ အစွပ်အစွဲပြဿနာပေါ်ခြင်း၊ စုန်း ပယောဂ ကြုံတွေ့ခြင်းကို ပြလျှင် ဇာတာရှင် ထိခိုက်တော့မည်။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် ကောင်းဌာနတွင်နေစဉ် ဘုရား၊ ရဟန္တာနှင့် ဆိုင်သော ပွဲများကို ပြလျှင် ဇာတာရှင် ကောင်းစားတော့မည်။
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် ဆိုးဌာနတွင်နေစဉ် ရွှေမှုဖြစ်ခြင်း၊ ရင်ခွဲခြင်း၊ ရူးခြင်း၊ ရေနစ်ခြင်း၊ ကလေးအမြင့်မှကျခြင်း များကို ပြလျှင် ဇာတာရှင် ထိခိုက်တော့မည်။
ကြာသပတေးဂြိုဟ် ကောင်းဌာနတွင်နေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကပ်လျှက် မျက်နှာစာ၊ အိမ်၏ခေါင်းရင်း အထက်ပိုင်း တို့တွင် ပျားစွဲခြင်းကို ပြလျှင် ဇာတာရှင်ကောင်းကျိုး ရတော့မည်။
ကြာသပတေးဂြိုဟ် ဆိုးဌာနတွင် နေစဉ် နောက်ဖေးဘက်၊ အိမ်အောက်ဖက်တို့တွင် ပျားစွဲခြင်း၊ မြေမှု၊ မိန်းမမှု ပေါ်ခြင်းကိုပြလျှင် ဇာတာရှင် ထိခိုက်တော့မည်။
သောကြာဂြိုဟ် ကောင်းဌာနတွင်ရှိစဉ် အိမ်ထဲသို့ အတောင်ပေါက်သတ္တ၀ါ ၀င်လာခြင်း၊ ဇာတာရှင် လက်နှင့် ကိုင်မိ ထိမိလျှင် ဇာတာရှင်သည် ကောင်းကျိုးရတော့မည်။
သောကြာဂြိုဟ် ဆိုးဌာနတွင်ရှိစဉ် အတောင်ပေါက်သတ္တ၀ါ နာလျှက်ဝင်လာခြင်း၊ ၀င်ရောက်သေခြင်း၊ အိမ်သာ ပြိုပျက်ခြင်း၊ သွေးသားမသန့်သူ ၀င်လာခြင်း၊ နာတာရှည်လူနာများ ၀င်လာခြင်းကို တွေ့မြင်ရလျှင် ဇာတာရှင် ထိခိုက်တော့မည်။
စနေဂြိုဟ် ကောင်းဌာနတွင်ရှိစဉ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမ မျက်နှာမြင်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရောက်ခြင်း နိမိတ်များကို တွေ့ရလျှင် ဇာတာရှင် ကောင်းကျိုးရတော့မည်။
စနေဂြိုဟ်ဂြိုဟ် ဆိုးဌာနရှိစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကပ်လျှက်တို့တွင် မီးလန့်ခြင်း၊ သတ်မှု ခိုးမှုများဖြစ်ခြင်း နိမိတ်ကို တွေ့ရလျှင် ဇာတာရှင် ထိခိုက်တော့မည်။
အထက်ပါ နိမိတ်များသည် ကပ်ဂြိုဟ်ဖြင့် အပြန်အလှန် (အကြောင်းအကျိုးတို့ဖြင့်) ပြသော နိမိတ်နှင့် သဘောသွားခြင်း မတူညီပါ။ ကောင်းဌာန ၂ဌာနဖြစ်သည့် (တိုင်ထိပ်နှင့် တန်းစီး)တို့မှ ပြတတ်သော ဣဋ္ဌနိမိတ်များကြောင့် ဇာတာရှင်အဘို့ ကောင်းကျိုးများ (အရာဌာနမရွေး) ပေါ်ပေါက်ခံစားရနိုင်သည့် နိမိတ်များနှင့် ဆိုးဌာန ၂ဌာနဖြစ်သည့် (ပြနှင့်တိက္ခနိစ်)တို့မှ ပြတတ်သော အနိဋ္ဌ နိမိတ်များကြောင့် ဇာတာရှင်သည် ကံနိမ့်ကျလျှက် အစစအရာရာတွင် ထိခိုက်နစ်နာ မအောင်မြင်တတ်သော သဘောကို ယူဆခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ကောင်းသောဌာနနံများ ၀င်လျှင် ကောင်း၍၊ ထွက်လျှင် ကံနိမ့်နေသောသဘော၊ အရာရာ အဆင်မပြေသည့် သဘောဖြစ်သည်။
ဆိုးဌာနရှိ နံများ ထွက်လျှင် ပျက်လျှင် ကောင်၍ ၀င်လာလျှင် ခိုက်တတ်သည့် သဘောဖြစ်သည်။
ကောင်းသောဌာနတွင် ရှိသောဂြိုဟ်၏ အကျိုးပြုစေတတ်သော သဘာဝ၊ ၀င်လာစေတတ်သော သဘာဝများကို ပျက်ပြယ်စေတတ်သော သဘာဝတရားများမှာ နံတူပစ္စည်းများ အလိုအလျောက် ၀င်လာခြင်း၊ အနိဋ္ဌ ပစ္စည်းများဖြစ်ခြင်း၊ ဇာတာရှင်က ငှားရမ်း၍ အပေါင်ခံ၍ ၀င်လာခြင်း၊ အပျက်မကင်းသော နံပစ္စည်းများ ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့သည် ကောင်းဌာနရှိ အကျိုးပြုစေတတ်သော ဂြိုဟ်အားနည်းစေရန် ဟန့်တား၍ ယတြာကျေသွားစေတတ်သည်။
ဥပမာ- စနေဂြိုဟ်သည် စနေဂြိုဟ် အထူးကောင်းမွန်သော ၀ိသေသလက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံ၍ ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သည့် အခါပင်ဖြစ်လင့်ကစား ဘိနပ် အလကားဝင်ခြင်း၊ ထီးပျက် မေ့ကျန်ရစ်ခဲ့၍ ၀င်ခြင်း၊ ဖောင်တိန်အကျိုးကောက်ရခြင်း၊ နာရီအပေါင်ခံမိခြင်း စသည်တို့ ပြုမိဖြစ်မိသော် အကျိုးပေး ကျေစေပြေစေတတ်သော သဘောဖြစ်လေသည်။
ဣဋ္ဌ သဘာလည်းဖြစ်၊ အပိုင်သဘော၊ အလကားရရှိခြင်း၊ ကောက်ရသကဲ့သို့ ၀င်ခြင်း၊ အပြစ်အနာ ကင်းစင်ခြင်းသည် ကောင်းနိမိတ်ကို ဆောင်၍ အထက်ပါအတိုင် မယူရပါချေ။
ဆိုးသောဌာနတွင် ရှိသောဂြိုဟ်၏ ဆိုးစေ ခိုက်စေသော သဘာဝ ထွက်စေပျက်စေသော သဘာဝများကို ကြေပျောက်စေတတ်သော သဘာဝတရားမှာ မိမိအိမ်အတွင်း နံတူ တိရစ္ဆာန်များ သေကြပျက်စီးသွားခြင်း၊ ထွက်သွားခြင်းတို့သည်လည်း ယတြာကျေလေသည်။
နိမိတ်ဟူသော သဘောမှာ ထူးထူးခြားခြား ၀ိသေသအသွင် လက္ခဏာကိုဆောင်မှ နိမိတ်ဟုယူ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တွေ့ရိုးတွေ့စဉ်များသည် နိမိတ်မဟုတ်ပါ။
ကောင်းသော အင်္ဂါ၏ ဒသာတွင်
ဘုရားမှ ထူးဆန်းစွာ နိမိတ်ပြခြင်း
ပီတိသုခကြုံစေသော မီးနှင့်ဆိုင်သောနိမိတ်ကိုပြလျှင် ကောင်းသောအကျိုး
မကောင်းသော စနေဂြိုဟ်၏ ဒသာတွင် အ၀တ်အင်္ကျီ စသည် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ အိမ်ပေါ် အိမ်နားတွင် မီးလန့်ခြင်း သည် ဆိုသော အကျိုးဖြစ်မည့်သဘာကို ပြလေသည်။
အိမ်ပေါ်တွင် မွေးထားသော နွားသေသွားခြင်းသည် စနေသားအဘို့ ယတြာကျေစေ၏။
Posted by aha at 2:38 AM
Labels: မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်ပညာရပ်များ
သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်း ဗေဒင်ပညာ (နောက်ဆုံးပိုင်း)